Saganta Irreechaa Belgium Antwerpen Onkoloolessa 6/10/2012
Irreechaa Oromoo Antwerpen Baran guyya Onkololessa 6, 2012 ; sa’a 9:30 irra kanfnee walti qabamun Ulfefana Bakkaa Irreechaa Galgenweellaan 71, 2050 Antwerpen Wari Trien dhuftan Metro Halewijnlaanti butan gara fula duran harka bitaa irra karan gadi deemu Malkati geessa. Sa’aa 10 Malka bunee saganta keenya Ittifufa.
Bara Darbe Onkoloolessa 2/2011 Oromoon Belgium Safuu fi Adda Oromoo Irreefanaa waloon qabnu Bakka Jarsii Ebba Oromoo fi Oromoon aadda isaan fi safuu isaan kabajan hundi argamantii waliinkabajachuun keenya ni yaadatama.
Bara kana ilee saganta fi yerro ayyana Irrreefana ba'ee Fulbana 29_Onkoloolessa 6/2012 saganteefamee keessa Onkoloolessa 6 bara 2011 tii goochuuf waan saganteefaneef guyya sun Linkeroverti argaumun Adda fi Enyumaa Oromoo akka waliin kabajnuuf Oromoo hundi Maatii isaa hunda fudhatee Uufanna Adda Oromoo uffachuun akka nu argamtan isiin afeera.
Oromoon dhuugan adda isaa fi enyumma isaa irrati wal dukka dhabata !!!
Oromummaan keenya tikksuun dirqama!!!